BAREFOOT...!!!: ब्रजेशको वाइल्ड यायावर
ब्रजेशको वाइल्ड यायावर
स्तम्भकार, नेपाली सिनेमाका कथा-पटकथा लेखक, निर्देशक र कलाकार समेतका अनेक रूपमा नेपालीहरुमाझ परिचित ब्रजेश खनालको परिचय थपिएको छ, उपन्यासकार रुपमा । यसै सप्ताहन्तबाट बजारमा आउन लागेको नेपाली उपन्यास "यायावर" मार्फत आख्यान लेखनका क्षेत्रमा पाइला चलाएका हुन् ब्रजेशले । कुरैकुरामा यायावर पढ्ने अवसर मिल्यो र लागेका कुरा लेखिहालुँ भन्ने जाँगर पनि । नयाँ शैलीका लेखन र लेखकहरुको भीडमा अर्को नाम बनेर थपिएको देख्न सकिन्छ यायावरलाई ।
Yayavar by Brazesh Khanal (Image : writer himself)
समाज सिधा-सादा छैन, घुमाउरो, जेलिएको र जेरीझैं बटारिएका पात्रहरुको बीचको जटिलता बुझिनसक्नुको छ । यायावर यस् अर्थमा पनि बिशेष छ कि यस्ले ती पत्रहरुलाई केलाउने चेष्टा गरेको छ, बोल्ड तरीकाले । हाम्रा आफ्ना दिमागमा उब्जीने बिचार र तरंग तथा जिन्दगीमा जानेर या नजानेर गरिएका एड्भेन्चर कुनै रमाइला, कुनै टीठलाग्दा र कुनै घीनलाग्दा पनि छन्, जस्लाई यथार्थपरक ढंगले आख्यानका रुपमा अगाडि सार्न लेखक सफल देखिन्छन् । हाम्रा बिगत र बिचारहरु सबै हामीले बाहिर ल्याउने जस्ता ज्ञानी र राम्रा हुन्नन्, कुनै त अत्याशलाग्द पनि छन् । यायावरले त्यस्तै एउटा झन्डै झन्डै बृद्धको फर्केर इमान्दारीपुर्वक जीवनलाई हेर्ने प्रयास देखाउँछ, उस्का यौनबिकृति, बाल तथा किशोरवयका अनुभब र आरोह अवरोह देखाउँछ । जगदीश घिमिरेका शब्दमा "मनको दाँया र बाँया कुनाको पीङ र पीडामा बारम्बार झुलिरहने, एउटा फरक जीबन भोग्न वाध्य निम्नवर्गको निर्धो र निर्दोष केटाको जीबनमा अनायास बन्न पुगेका जटील गाँठाहरु र तीनलाई फुकाउन उस्ले आजीवन गरेको संघर्षको मार्मिक कथा हो यो ।" जीवनसङ्गै भौंतारिएको फीरन्तेको कथा र उस्का मोड सुन्दा कतिपय ठाउँमा आफ्नै लाग्छन् त कतिपय ठाउँमा यस्तो पनि हुन्छ भन्ने जस्ता लाग्छन्, तैपनी जीजिबिसाभित्रको पीडा, भय र घीनको चीरफार को नाम यायावर हो ।
Cover of Yayavar by Brazesh Khanal
यायावरको कथा राजमार्गमा भएको एउटा बस दुर्घटनाबाट सुरु हुन्छ । तर मूल कथा त्यो हैन । दुर्घटनाग्रस्त बसको एउटा यात्रीको कथा हो यायावर । कथा सुरु हुँदा पचास वर्ष पुग्न आँटेको यो पात्रको केटाकेटी बेलादेखिका जीवनका पत्रहरु क्रमश उघ्रिंदै जान्छन् । उसको कथा एउटा आम तपाईंहामीको जस्तै छ । अक्सर आख्यानका पात्रहरुमा नायक हुन्छन्, खलनायक, नायिका हुन्छन् । तर यायावरमा नायक, नायिका र खलनायकको कुनै स्पष्ट सीमाना छैन । अर्थात वास्तविक जीवनका पात्रहरु जस्तै छन् यिनीहरु । बेलबेलामा खलपात्रसंग सहानुभूति हुन सक्छ, नायक वा नायिकासंग रिस उठ्न सक्छ । यो नै यायावरको सबैभन्दा रोचक र रमाइलो पक्ष हो । कलिलो उमेरमा नियतिले अचानक एकपछि अर्को ववण्डर मच्चाएपछि शारीरिक र मानसिक रुपमा यायावर बन्न पुगेको बैकुण्ठेको कथा हो यायावर । आफूले सानै उमेरदेखि मरिहत्ते गरेर एकोहोरो मन पराएको गाउँभरिकी सबैभन्दा सुन्दरी केटीलाई प्राप्त गरेर पनि ऊ किन उसको आफ्नो हुन सक्दैन त ? किन हुनेखाने गाउँको घर छोडेर ऊ दिनरात भौंतारिन्छ ? ममचा पसलको बेयरा देखि पत्रिकाको सहायक सम्पादक सम्म बनेर पनि किन ऊ त्यहाँ टिक्न सक्दैन ? किन र कसरी बंगलादेश देखि बैंककसम्म भौंतारिएर पनि कुनै स्थायित्व उसले पाउँदैन ? बिन गन्तव्य भौंतारिएर जब यायावरले जीवनको उत्तरार्ध शुरु हुने बेला आफ्नो बिश्राम यही हो भन्ने निधो गर्छ, किन उसको जीवनमा अर्को अचम्मको अप्रत्याशित मोड आउँछ ? यायावरको कथा यही सेरोफेरोमा बुनिएको छ ।
समग्रमा "यायावर" पढ्दै जाँदा कतिखेर एउटा फिरन्तेको कथाबाट देशमै फिरन्ते र निरर्थक बनाइएका हामी नेपालीको कथासङ्ग जोडीन्छ पत्तै हुन्न । भाषाशैली समाजमा बोलिने जस्तै छ, "पोलिटीकल्ली करेक्ट" बनाइएको छैन । फिल्मलेखनको अनुभवको प्रभाबले धेरै दृष्य चलचित्र हेरेझैं लाग्छन् । कथामा पत्र उप्किंदै जाँदा मानसिकता र संवेदनाका पत्र समेत उप्किन्छन् । धेरै पटक इमान्दार मानसिक व्याख्या अश्लील लाग्न सक्छन्, निर्लज्ज लाग्न सक्छ, तर मानबीय वास्तबिकता निर्लज्ज नै हुन्छ । चलिआएका "सुमधुर, काब्यात्मक तथा मिलाइएका" श्रीङ्गाररसले युक्त उपन्यास भन्दा यो बोल्ड आख्यान फरक छ र धेरै हदसम्म मनोरन्जनात्मक पनि , जीबनको उत्तरार्धमा रहेको एउटा फिरन्तेको इमान्दार तर वाइल्ड कथानक नै यायावर हो !
The writer himself : Brazesh Khanal
पुस्तकको नाम : यायावर
लेखक : ब्रजेश खनाल
प्रकाशक : अर्किड बुक्स
मुल्य : २९५।-
केही उत्कृष्ट छोएका वाक्य :
"मलाई भने बादलले जहिले पनि मन्त्रमुग्ध बनाउँछ । आजमात्र हैन, केटाकेटी हुँदादेखि नै म बादल हेरेर अघाउन्नथेँ । अरु साथीहरू रमाउँदै खेलिरहेको बेला पनि म घण्टौं बादल हेरेर बसिरहेको हुन्थेँ । अनि बादल हेरेको बेला जहिले पनि म एउटै कुरा सोच्थेँ, “कहाँ होला यिनको गन्तव्य, के होला यिनको अविरल र अविच्छिन्न यात्राको उद्देश्य ?”
सँधैभरि कति निष्फिक्री देखिन्थे बादलहरू । मलाई त्यतिबेला आफू पनि तिनै बादल जस्तो उडिरहन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो । त्यतिबेला मलाई साँच्चै मेरो जीवन तिनकै जस्तो बेठेगानको हुन्छ र म पनि तिनीहरू जस्तै हुन्छु भन्ने के थाहा ? त्यसैले होला आमाले बेलाबेला भन्ने गर्थिन्, “कुनै पनि कुरा चिताउने बेला हजारपटक सोच्नुपर्छ । के थाहा कुन बेला भगवानले तथास्तु भनेको बेला पर्छ ।”
मैले बादल बन्ने चाहना गर्दा पनि शायद भगवानले तथास्तु भनेको हुनुपर्छ ।"
“हैन बाङखुरेु, मान्छेले त झन् आफ्नो रुप बादलले भन्दा पनि छिटोछिटो फेरिरहेको हुन्छ । तैंले त्यो कुरा अहिले बुझ्दैनस् ।” ठूलो हुँदै गएपछि मात्र मैले बुझेको थिएँ, आमाले भनेको ठीकै रहेछ । बरु बादललाई चिन्न सकिएला मान्छेलाई चिन्न गाह्रो हुँदो रहेछ ।"
"म पढाइमा राम्रै थिएँ । तर हिसाब मलाई साह्रै गाह्रो लाग्थ्यो । गाउँको पढाइ भएकोले अङ्ग्रेजी त सबैको खराबै थियो । अहिले आएर बुझ्दछु, पढाउने शिक्षकको पनि अङ्ग्रेजी खराब थियो । नेपाली भने मलाई साहै्र रमाइलो लाग्थ्यो । मैले लेखेको हेरेर नेपाली पढाउने गुरु भन्थे, “कुमाइ भए पनि यो उपाध्ये बाहुन जस्तो छ ।”
मलाई कुमाइ भन्या के हो उपाध्ये भन्या के हो भन्ने थाहा थिएन । हाम्रो कक्षामा सबै जातका विद्यार्थी थियौँ तर हामी कसैलाई पनि हामी फरक जातका हौँ भन्ने थाहा थिएन । हाम्रा लागि त हामी सबै बरोबर, सबै साथीहरू । अबूझ, अज्ञानी बालकहरू जो थियौँ त्यति बेला । बुद्धिको पनि विकास भएको थिएन । त्यस्ता अज्ञानीहरूलाई के थाहा हुनु ? पछि धेरै पढ्दै गएपछि, ज्ञान बढ्दै गएपछि, परिपक्व हुँदै गएपछि, बुद्धि बढ्दै गएपछि पो त्यस्ता कुराहरू थाहा हुन्छन् त मानिसलाई ।"
"मेरो मनमस्तिष्कमा त्यो क्षण कुनै क्यामरामा फोटो अंकित भए जस्तो गरी कँुदिएको थियो । बरु क्यामराले खिचेको फोटोको समयसँगै रङ्ग उडेर जान्छ, मनमा खिचिएको तस्वीरको रङ्ग त जहिले पनि त्यति नै सफा, चहकिलो र स्पष्ट रहँदो रहेछ । मान्छेले जतिसुकै बिकास गरे पनि मन जस्तो तगडा क्यामरा त अझै पनि कहाँ बनाउन सकेको रहेछ र ?"
"यो फुच्चे मात्र होइन, उमेर भन्दा पहिले नै जिन्दगीको थप्पड खान बाध्य अरु धेरै केटाकेटीहरूमा मैले त्यस्तो नरमाइलो संयोग देखेको छु । ती कलिला केटाकेटी, जसको बाल्यकाल राम्ररी बित्नै नपाउँदै, किशोरावस्था नै नआइ तिनीहरू वयस्क बन्न बाध्य हुन्छन् । अनि प्रकृतिको नियम मिचेका हरेक अरु कुरामा जस्तै केही न केही अप्ठ्यारा प्रभावहरू तिनमा देखिन्छन् । कार्बाइड हालेर समयभन्दा पहिले नै पकाइएका केरा जस्ता लाग्छन् मलाई त्यस्ता किशोरावस्था नदेखेका केटाकेटीहरू ।"
"मैले नोटको बिटो हेरेँ । कति पैसा होला त्यो जम्मै ? मैले सोच्न पनि सकिनँ । जे होस्, मलाई चाहिएको मात्र बीस रुप्याँ हो । बाहिर टहटह लागेकोे जूनको उज्यालो कोठा भित्र नछिरेको भए मलाई नोटहरू चिन्न गाह्रो हुन्थ्यो । मैले सोचेँ, पवित्र प्रेमका लागि भगवानले पनि बाटो सजिलो बनाउँदा रहेछन् कि क्या हो । मैले दश–दशको दुइटा नोट झिकेँ । बिटो जहाँको त्यहीँ राख्ने बेला मेरो मनको देब्रे कुना अचानक व्यूँझेछ, लामो हाई काढ्दै प्वाक्क बोल्यो, “थोरै पैसा चोर्ने पनि चोर, धेरै पैसा चोर्ने पनि चोर ।”
"बारुद ओच्छ्याउनका लागि चढेका मान्छेहरू तलबाट सानासाना देखिएका थिए ।
“एउटा ठाउँलाई अर्को ठाउँमा जोड्ने बाटो बनाउन कति गाह्रो हुँदोरहेछ,” मैले मनमनै सोचेँ, “तर एउटा मनलाई अर्को मनसम्म जोड्ने बाटो बनाउन त्यो भन्दा कता हो कता कठीन हुन्छ । मनमा त बारुद लगाउन पनि पाइँदैन ।”
"हुन त त्यसपछि मुलुकमा धेरै परिवर्तनहरू भए । ३६ सालमा नआएको भनिएको प्रजातन्त्र ४६ सालमा आयो । त्यतिले पनि पुगेन, माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो । हजारौं नेपालीले एकआर्कालाई मारे, जनयुद्ध सकियो । प्रजातन्त्रले चोला फेरेर लोकतन्त्र बन्यो, त्यसले पनि चोला फेरेर आफूलाई गणतन्त्रमा परिणत गयो । देशमा निकै कुरा बद्लियो, समाज बद्लियो, हैसियतहरू बद्लिए । म त्यस्तै रहेँ, त्यहीँ नै रहे । मानिसहरू कहाँबाट कहाँ पुगे । मेरो जीवनमा कुनै कुराले केही पनि फरक पारेन ।"
Labels: Books, Nepali, Novel, Review